Momba anay - Hebei Shouzheng Technology Co., Ltd.
Hebei Shouzheng Technology Co., Ltd. dia fikarakarana ara-pahasalamana matihanina sy mpanamboatra fitaovana ara-pitsaboana, mpivarotra sy mpanondrana, izay hita ao amin'ny tanàna Shijiazhuang, Faritanin'i Hebei any Sina.
Ny vokatra lehibe eto aminay dia ahitana saron-javily, mason-jaza, mason-java-bary 30, mason-java-manidina, fisotrony, fanaovan-tsitrapo fanaintainana, menaka ilaina amin'ny volo, dermatitis cream, hemorrhoids cream, gynecology gel, fonon-tany nitrile, fonon-tànana PVC, vita am-bavony vita amin'ny inflatable, swabs cotton, tourniquets, ary kojakoja azo ampiasaina amin'ny fitsaboana hafa, sns.
Nahazo ny mari-pahaizana FDA, CE, ISO, manome antoka ny vokatra avo lenta isika. Ny ekipa mpamokatra mahay, ekipa mpivarotra matihanina, ekipa mpanara-maso kalitao tsara sy mpanamboatra fonosana talenta no hanome anao tolotra tsy manahy.
Serivisy mialoha ny varotra: consulting orinasa matihanina sy serivisy famolavolana maimaimpoana. Tadiavo ny fomba OEM / ODM.
Eo ambanin'ny serivisy fifanarahana: fampiharana ny fanaraha-maso tsara kalitao ISO, fanaterana fotoana ara-potoana, fandaminana ny logistic fiarovana ary fanohanana ara-bola tsara.
Serivisy ivarotana: Manentana 100% ny hafanam-po hamahana sy handraisan'ny tapitrisa ny hadisoana mety misy amin'ny fotoana mety isika.
Ny ataonay rehetra dia ny hampihenana ny vidin'ny fividiananao sy ny fikojakojana anao, ary manome hery anao ny fifaninanana eo amin'ny tsena eo an-toerana. Ny serivisy rehetra an'ny SOSUN, dia hamonjy anao be dia be ny asa ary hitondra traikefa mahafaly ianao.
Manasa am-pahatsorana ny mpanjifa any Chine sy Abroad izahay hamolavola fikarakarana fitsaboana ara-pahasalamana sy fitsaboana ara-pahasalamana ary hiasa miaraka amin'ny fanantenana lehibe. Miandrandra ny hiasa miaraka aminao mandritra ny fotoana maharitra!